I-45 YE-BUZZ EFANELEKILEYO YOKUSIKWA KWENWELE YAMADODA (ISIKHOKELO SE-2021) - IINWELE ZAMADODA
I-45 Buzz Sika iiNwele
Eyona Iinwele Zamadoda I-45 Buzz Sika iiNwele
I-buzz cut ihambisa i-minimalism kunye nesitayela kwizinwele ezilula zamadoda. Ukuba ujonga ulungiso olusezantsi, olulula nolupholileyo lwezinwele ezingamadoda ezifuna iinwele ezimfutshane zonke…
I-buzz cut ihambisa i-minimalism kunye nesitayela kwizinwele ezilula zamadoda. Ukuba ujonge ulondolozo olusezantsi, ulula kwaye upholile buzzed iinwele zamadoda ezifuna iinwele ezimfutshane macala onke, ke ukunqunyulwa kweenwele ze-buzz kunokuba kukujonga okudingayo.
Irhabaxa kwaye iyindoda, ukusikwa kwe-buzz yamadoda kufaka iinwele ezimfutshane ezijikeleze intloko. Ukunqunyulwa kwe-buzz kunokuba kufanelekile kwiimbaleki kunye namajoni afuna istayile somkhosi, kodwa i-buzz cut fade kunye ne-undercut nayo yeyangoku kwaye inesitayile. Abenzi bee-Barbers bakhethe ukusikwa okufutshane kunye nokude njenge-fashion runway kujonga iminyaka, kwaye kutsha nje, uninzi lwabantu abadumileyo bafumana i-zero okanye ulusu olucimiweyo.
Ekugqibeleni, zininzi iindlela ze-buzz ezisikiweyo zokufumana lo nyaka. Ukukunceda ufumane iinwele zakho ezimfutshane kakhulu ezilandelayo, nazi ezona zilungileyo zokucheba iinwele zamadoda!
1Yintoni i-Buzz Sika?
MbiniNdifuna ntoni ukuze usikwe iBuzz?
3Uyifumana njani i-Buzz Sika
4Izitayile ezilungileyo zeBuzz
5I-Buzz Sika ukuphela
6I-Buzz Sika ngaphantsi
7I-Buzz Sika iTaper
8Mfutshane Buzz Sika
9Ixesha elide leBuzz
10I-Military Buzz Sika
Shumi elinanyeInduction Sika
13Ephakamileyo kunye noTight
14Ephakamileyo kunye neTon Recon
Shumi elinantlanuI-Butch Sika
17I-Buzz Sika ngeendevu
18Ulusu Fade Buzz Sika
19Buzz Sika iMohawk
Amashumi amabiniI-Buzz Sika ubude
amashumi amabini ananyeI-Buzz epholileyo Sika iiNwele
21.1I-Buzz Sika + Uyilo lweenwele
21.2I-Temple Fade Buzz Sika + iindevu
21.3Ukucheba okuphezulu kweBald + Buzz Sika
21.4I-Buzz Sika ujikeleze + iindevu ezipheleleyo
22Indlela yokuziNika i-Buzz Cut
22.1Eyona Buzz cut Clippers
22.3Sika iinwele phezulu
22.4Sika iiSides kunye noMva
Yintoni i-Buzz Sika?
Ukunqunyulwa kwe-buzz kukucheba kwamadoda okudala okufuna ubude obufutshane beenwele kuyo yonke intloko. Nangona ubude obuyi-buzz bunokwahluka ngokuxhomekeka kukhetho lwakho lobuqu, ukusikwa kungasebenza kulo naluphi na uhlobo lohlobo lweenwele okanye imilo yobuso. Njengabasebenzi abasikiweyo, i-buzz cut cut haircut ingabhalwa ngeenwele ezimfutshane emacaleni nasemva ngeenwele ezinde ngaphezulu.
Ngokuqhelekileyo iyaziwa ngokusetyenziswa kwayo emkhosini, i-buzz cut is no style frills esebenzayo nesebenzayo. Nangona kunjalo, kubafana abafuna ukugcina imali ngeenwele ezisisiseko kodwa ezinemfashini, i-buzz cut hairstyle lolona khetho lufanelekileyo.
Ukunqunyulwa kunetoni yezibonelelo, ukusukela ekugcineni iinwele zakho ebusweni bakho ukupholisa ngokukhawuleza. Ngapha koko, ukusikwa kulula kakhulu kunokwenziwa ekhayeni ngeesikipa esilungileyo kunye nesandla esizinzileyo.
Nangona izitayile ezisikiweyo ze-buzz zisebenza kubume obuninzi bobuso, abo baneentloko ezingalinganiyo okanye iindlebe ezinkulu banokufuna ukucinga ngokukhetha isitayile esinde. Ukusikwa okufutshane kakhulu kwe-buzz kuya kuzisa naziphi na izigaqa okanye iimilo ezingaqhelekanga ezifana nezikrelemnqa entlokweni.
iindlela ezintsha zokucheba iinwele zabafana
Ubude obufutshane bokunqunyulwa kwe-buzz bunokuthetha ukuba izinto zobuso ezinjengempumlo okanye iindlebe zigxininisiwe ngaphezu kwesiqhelo. Ukuba uyazazi malunga nalo naliphi na icandelo lobuso okanye intloko, cinga ukusikwa kwe-buzz ixesha elide okanye ukunqunyulwa kweqela labasebenzi.
Ndifuna ntoni ukuze usikwe iBuzz?
Ukunqunyulwa kwe-buzz kulula kakhulu ukulungiselela-konke okudingayo zezinye iinwele entlokweni yakho. Inwele enye okanye ezimbini zoboya bubude obulungileyo ukuze buzaliswe zii-clippers, kodwa iinwele ezinde okanye ezimfutshane ziya kusebenza ngokunjalo.
Ukuba uceba ukucheba intloko yakho ekhaya, uyakufuna isibini esihle seenwele ezinezicwangciso ezininzi okanye ubukhulu bokugada ukuze utshintshe ubude bokunqunyulwa kwe-buzz. Ngaphandle koko, nayiphi na indawo yokucheba iinwele oyityelelayo iya kuyazi ngqo indlela yokusika i-buzz cut.
Uyifumana njani i-Buzz Sika
Uninzi lwee-barber kunye ne-stylists ziyayazi indlela yokwenza kunye nesitayile sokunqunyulwa kwe-buzz kuba i-hairstyle inokuba lula kwaye ikhawuleze ikhawuleze. Into ebaluleke kakhulu ukuba uyazi xa ucela ukusikwa kwe-buzz kukuba ufuna ukuba iinwele zakho zibe zide kangakanani, njengoko ubude bokunqunyulwa yeyona nto iphambili kwisitayile.
Ukucela nje ukusikwa kwe-buzz ngaphandle kwenombolo ethile ye-clipper kunokufumana ukusika abasebenzi (i-aka buzz ende) okanye intloko echebiweyo.
Eyona ndlela yokucela i-hairstyle kukwazi ukuba yeyiphi ubukhulu be-clipper obuhambelana nobude beenwele ozifunayo ngaphezulu kwentloko yakho. Ngokubanzi, naphi na ukusuka ku- # 1 ukuya ku- # 4 kwamkelekile kwaye uya kuba nakho ukushukumisa i-buzz cut.
Izitayile ezilungileyo zeBuzz
Uninzi lwabantu aluqondi nje ukuba kungakanani ukwahluka okukhoyo ngaphakathi kunwele lwamadoda we-buzz cut. Ngelixa isitayile sokucheba ngokwaso silula, kukho iindlela ngeendlela zokuyinxiba, kwaye uninzi lokwahlukahluka kubandakanya ubude bokusikwa kwe-buzz.
Kuxhomekeka emsebenzini wakho, indlela ophila ngayo kunye nefashoni yokuqonda, ezinye zezi zinto zisikiweyo zilandelayo zinokuba yinto elungileyo ekusikeni i-buzz yakho.
Ngelixa uninzi lweendlela zokucheba i-buzz zifuna ubude beenwele obujikeleze intloko, ukusikwa kwe-buzz kufuna amacala aphelile kunye nomva ngokusikwa okufutshane kakhulu ngaphezulu. Ifana ne phezulu kwaye ibambe , i-buzz cut fade inesitayile kwaye inesitayile ngenxa yomahluko kubude beenwele.
Amadoda anokukhetha phakathi kwe phezulu , phakathi , okanye ukuphela okuphantsi ukusikwa kwe-buzz. Ngaphezu koko, unokucela umchebi wakho ukuba a ukucheba ulusu ukucoca iinwele ukwenza amacala achetyiweyo . I-Edgy kunye nendoda, i-buzz fade haircut yeyona nguqulelo ithandwayo kunqunyulwayo namhlanje.
I-Buzz Sika ngaphantsi
Ukunqunyulwa kwe-buzz ngaphantsi inokuba yinto entle kwaye yanamhlanje ithathe iinwele zeklasikhi. Uhlobo luqala ngeenwele ezimfutshane emacaleni nasemva, zisikwe kubude bonke. Ukucheba kwe-buzz ngaphezulu kukude, kunika umahluko wokuqala. I-undercut buzz cut yeyona ilula ukuyenza ekhaya kunye neziqhiki.
I-Buzz Sika iTaper
I-buzz cut taper luhlobo lwesitayile esilondolozayo. Ngelixa iifayile ze ukuphela kwetaper Ukudibanisa iinwele ezimfutshane, a iinwele zetaper ishiya ubude obuthile. Eyona nto ihambelana # 2 okanye # 3 ngeenxa zonke iinwele, i-buzz cut taper ilungele abafana abafuna iinwele ezimfutshane ngaphandle kokuveza ulusu oluninzi.
Mfutshane Buzz Sika
I-buzz cut cut is stylish, yanamhlanje, kwaye kulula ukuyifumana. Ukuba uneenwele ezishinyeneyo, ezirhabaxa ongafuniyo ukuzenza, isitayile esinqumlayo samadoda sokuphela kwe-buzz sinokulungela wena. Ngamacala asikiweyo kunye neenwele ezimfutshane ngaphezulu, inkangeleko yeyamadoda kwaye intle.
Iinwele zamadoda amnyama 2019
Ixesha elide leBuzz
Ukunqunyulwa kwe-buzz ende kukucheba iinwele kubafana abafuna isitayile sobuchule esingenamsebenzi. Ngefade okanye i-undercut emacaleni, i-buzz ye-buzz enqunqiweyo ende ubude bungaphambi ko abasebenzi abasikiweyo .
I-Military Buzz Sika
Ukunqunyulwa kwe-buzz yasemkhosini kukucheba mfutshane kakhulu kumadoda anemiphetho ebukhali kunye nokujonga kwendoda. Ukufezekiswa kwamadoda anethambo elomeleleyo lesifuba kunye ne-jawlines, i-buzz ephefumlelweyo yomkhosi yokucheba iinwele yeyona imfutshane mfutshane inwele yakho onokuyenza ngaphambi kokucheba intloko.
Ukunqunyulwa kwe-induction yeyona nto yahlukileyo kwaye imfutshane yokusika i-buzz yazo zonke. Ukugcwala zii-clippers ngaphandle komlindi, ukusikwa kokona kufutshane ungafikelela kunwele oluchetyiwe ngaphandle kokucheba zonke iinwele zakho. Njengoko olu lukhetho oluhle kakhulu, unokufuna ukufumana uluvo lwesibini kumchebi wakho okanye ukhethe ukusikwa kwebuzz ixesha elide ngaphambi kokukhetha le nwele.
Ixesha elide kunoqheliso, i-burr cut iseyinwele emfutshane kakhulu. Ukufumana i-burr cut, sebenzisa nayiphi na inombolo ye-clipper ukusuka ku- # 1 ukuya ku- # 3 kwaye uya kuvelisa le ndlela ikhethekileyo efuna i-intshi okanye ngaphantsi kweenwele entloko. I-burr cut cut hairstyle lukhetho olufanelekileyo kubafana abaneenwele ezishinyeneyo kunye nezikrelemnqa okanye iimilo ezingalinganiyo entloko, njengoko iinwele ezinde ziya kukugubungela oku kungafezeki.
Ephakamileyo kunye noTight
Umahluko omncinci wokusikwa kwe-buzz kuyo yonke indawo, iindawo eziphakamileyo nezomeleleyo ezinamacala amafutshane nangaphezulu kancinci. Ngokubanzi, amacala kunye nomva zizicwangciso ezimbini zokucofa ezimfutshane kunaphezulu. Ukucheba iinwele okuphezulu kwaye okuxineneyo kongeza isitayile esincinci ekucocweni kwe-buzz ngokucacileyo ngokunika umahluko kunye neenwele ezaneleyo ukuba zisenokuphakama.
Ephakamileyo kunye neTon Recon
Njengoguqulelo olugqithisileyo, i-recon ephezulu kwaye eqinileyo ngokuyimfuneko imfutshane kakhulu iMohawk ejongeka ngathi ngumtya wokufika. Nge-recon ephezulu kwaye eqinileyo, emacaleni entloko kugcwele # 0 okanye # 1 ukuseta iziqwengana, kushiya umgca ezantsi kwentloko. Eli qhekeza lihlala licinywa nge- # 2 okanye # 3 ubukhulu bokugada. Isiphumo kukucheba kwamadoda okufutshane okugcotyiweyo ngobude obahlukeneyo beenwele.
Ukusika i-butch yenye yeenwele eziphefumlelweyo emkhosini zamadoda. Inwele ye-butch iyafana nokusikwa kwe-burr, kodwa kancinci kancinci. Mfutshane kwaye nkqu, oku kucoca iinwele kufutshane kufanelekile kubafana abathanda ukwenza isitayile Ivy League okanye abasebenzi abasikiweyo xa iinwele zabo zikhula.
Ukunqunyulwa kwebrashi ngokuqinisekileyo yeyona cut buzz inde. Ikwabizwa ngokuba yi-butch cut, ibrashi yokucheba iinwele icinywe ngeseti # 4 yokulinda. Mfutshane kodwa eshinyeneyo, ibrashi esikiweyo yeyona inde onokuya kuyo ngaphambi kokuba iinwele zakho zibe ngumsebenzi osikiweyo okanye Ivy League .
I-Buzz Sika ngeendevu
I-buzz enqunywe ngentshebe yeyona nto ilungileyo iinwele / iinwele zobuso combo. Abafazi abathandanayo nabanomdla, abafazi bathanda amadoda aneenwele kunye neendevu kuba ibonakalisa i-alpha eyindoda. Kukho inani leentlobo zeendevu ezinokuncedisa ukusika kwe-buzz yendoda.
Ungayikhulisa iindevu ezimfutshane nge-buzz cut fade kwaye iinwele zakho zobuso ziphele emacaleni. Ukuba ufuna inkangeleko eyodwa, iindevu ezinde ezishinyeneyo zinokuthopha. Ngokucheba iinwele kunye neendevu ekunene, ungasusa isitayile esitsha kodwa esixineneyo abanye banokulingana.
Ulusu Fade Buzz Sika
Ulusu olucimiweyo lwe-buzz cut lukhetho lwendalo kumadoda namakhwenkwe. Ikwabizwa ngokuba yi-bald fade, ulusu olucimileyo lokucheba iinwele ludibanisa amacala kwaye lubuyele eluswini ukubonelela ngumahluko omfutshane. Ukudityaniswa kweenwele ezinoboya, ukusikwa kwesikhumba okushunquliweyo kufutshane kakhulu ngeenxa zonke kodwa kugqamisa i-hairstyle ephezulu.
Ukuba ufuna ukulungelelanisa ukuphela kunye noyilo lweenwele, fumana i-buzz cut ngomgca. Yongeza indawo echetyiweyo kwinto yakho yokuphela okanye uhambe noyilo olucace gca olubalaseleyo.
Buzz Sika iMohawk
I-buzz cut mohawk idibanisa iinwele ezimbini zobudoda ukwenza ukubonakala kwe-badass. Ngamacala achetyiweyo okanye aphelileyo kunye neenwele ezimfutshane eziwela ezantsi entlokweni, i-mohawk buzz cut cut hairstyle yenye yeendlela zokuzimisa njengenkwenkwe embi.
I-Buzz Sika ubude
Xa ufumana i-buzzed haircut kwivenkile yokucheba, kubaluleke kakhulu ukuba wazi malunga nobude obahlukeneyo buzz cut. Ikwabizwa ngokuba yi iinombolo ezahlukileyo zokucheba iinwele , ubungakanani bekama, okanye oonogada bokucheba, ubude beenwele obucelileyo buza kugqiba ukuba umchebi wakho usika njani ukusika kwe-buzz yakho.
Nalu ulundwe olukhawulezayo lobude bokunqunyulwa kwe-buzz.
Inani 0 - akukho mlindi, uchebe intloko
Inani 1 Guard Inye yesibhozo ye-intshi
Inani 2 Guard Ikota enye ye-intshi
Inani 3 Guard Iintsimbi ezintathu-ezisibhozo ze-intshi
Inani 4 Guard Isiqingatha se-intshi
Inani 5 Guard - ezintlanu nesibhozo ze-intshi
Inani 6 Guard Iikota ezintathu ze-intshi
Inani 7 Guard - isixhenxe-sesibhozo se-intshi
Inani 8 Guard - intshi enye
I-Buzz epholileyo Sika iiNwele
Nayi eminye imizekelo eyahlukeneyo yeendlela zokucheba iinwele ze-buzz. Ukusuka kwi-buzz cut fade ukuya kwizitayile ezinoyilo lweenwele, nokuba zineenwele ezimfutshane, zininzi iindlela abafana abanokulungiselela ngazo ukusika kwabo kukhetho lwabo lobuqu.
I-Buzz Sika + Uyilo lweenwele
I-Temple Fade Buzz Sika + iindevu
Ukucheba okuphezulu kweBald + Buzz Sika
I-Buzz Sika macala onke + iindevu ezipheleleyo
Indlela yokuziNika i-Buzz Cut
Ukuzinika ukusikwa kwe-buzz ekhaya kulula kwaye kungabizi. Ngelixa ukusika iinwele zakho kunokubonakala kunzima, i-buzz cut haircut ilungile ngokuthe ngqo. Ukwenza intloko ibe yintloko, konke okudingayo ziziklipa zeenwele ezilungileyo, isipili, kunye nokukhanya okuhle.
Eyona Buzz cut Clippers
Ukwenza i-buzz cut nge-clippers, sincoma kakhulu abafana ukuba basebenzise izixhobo ezisemgangathweni ukuqinisekisa i-trim elula. Ukuba ufuna izihlangu ezinqabileyo zekhaya ezinamakhonkco abukhali kunye nolawulo oluphezulu, sicebisa Umbala we-Wahl Pro ongenantambo kwaye i Ukhetho lweClipper Elite Pro .
Intengiso 34.667 Izinto ezithethwe ngabantu I-Wahl Colour Pro engenantambo etshajekayo yokucheba iinwele kunye ne-Trimmer-Isikhokelo seMibala elula esineKhowudi yeKhowudi-yaMadoda, yaBafazi kunye naBantwana-Umzekelo 9649
Uncedo olungenantambo-Umbala wePro Pro ongenantambo ngu ...
Isikhokelo seKhowudi eMiselweyo yeCombs -Ukufumana kunye ...
Ukuzilolonga kwezempilo -Kuba iincakuba zethu ...
$ 34.97 Jonga iAmazon
Ukuba ucwangcisa ukubhuza iinwele zakho ekhaya rhoqo, sicebisa ukuba utyale imali kwizipaji zezinwele eziya kuhlala ngonaphakade. I-Barbers kunye ne-stylists bayayithanda I-Wahl Professional 5-Star Magic Clip kwaye i I-Wahl yoQeqeshiso lweBalding .
12,062 Izinto ezithethwe ngabantu I-Wahl Professional 5 Star Magic Clip Cordless Hair Clipper yeeNwele kunye neeStylists, i-6.25 intshi, ebomvu, i-1 Bala
UKUGCINWA KWENKQUBO YOKUFUNDA: I-5-Star Magic Clip yi ...
ISITAYILI NOKUSEBENZA: I-5-Star Magic Clip ...
IZIXHOBO ZOKUFUNDA: I-clipper, isinamathiselo esi-8 ...
$ 112.30 Jonga iAmazon
Ngaphambi kokuba uqale ukusika, uya kufuna ukuthatha isigqibo kubude bokunqunyulwa kwe-buzz yakho. Unogada omsebenzisayo uya kugqiba ukuba iinwele zakho zizakuba mfutshane okanye zide kangakanani. Abasebenzisi bee-Barbers basebenzise iinwele zokucheba ukubonisa ubude obahlukeneyo.
Qala nge # 3 okanye # 4 ngaphezulu ukulinganisa ubude bokunqunyulwa kwakho. Ukuba ufuna ukuhamba mfutshane, zama # 1 okanye # 2 ukusika i-buzz emfutshane. Ukuba ufuna intloko echetyiweyo, unokuhlala ungafumani kunqunyulwa kwe-buzz.
imikhono yomlenze imibono tattoos
Sika iinwele phezulu
Qala ngeenwele ezicocekileyo ezomileyo. Thatha ii-clippers zakho uze uziqhube ngaphambili ngasemva. Qiniseka ukuba ubhuza yonke intloko ukuze uqiniseke ukusikwa. Abanye abachebi iinwele bayathanda ukuya ngapha nangapha ekugqibeleni ukugubungela zonke ii-engile.
Sika iiSides kunye noMva
Xa uzinika i-buzz cut ekhaya, uya kufuna ukuya mfutshane emacaleni nasemva ngobude obude bodwa. Ukwenza umahluko, ukuba usike i # 3 ngaphezulu, emva koko ukhethe # 2 emacaleni. Ukuba unezakhono, ungenza nokuba i-buzz cut fade.
Kulapho isipili sesandla okanye isipili esinamacala amaninzi singena ngokufanelekileyo. Nciphisa amacala ngokuqala ezantsi kwaye uye phezulu. Qinisekisa ukuba iinwele ziyalingana macala onke entloko.
Okokugqibela, uya kufuna ukucoca umva wentamo yakho, ukubetheka, kunye neendlebe zakho. Ungasebenzisa izixhobo zokucheba iinwele ngaphandle kokuncamathisela ikama, isilungisi seendevu, okanye a ekumgangatho ophezulu weenkcukacha .
Iinwele ezintle ezithambileyo ngasemva
uphawu lokuzalwa olunyukayo
guys cool iinwele style
Isitayela seenwele samakhwenkwe